Author Topic: ကိုကိုထွန်းအေးတင်တဲ့ဟာသများ (Read 247614 times)
« Reply #720 on: February 16, 2012, 09:11:09 AM »
" ကင်း စောင့် နေ ရ လို့"
မတွေ့ တာကြာပြီဖြစ်သည့် သူငယ်ချင်းမနှင့် ပြန်ဆုံရာ..ကိုဘမောင်က သူ့ သား ဓါတ်ပုံအား ထုတ်ကြွားသည် ။
" ဒါ..ငါ့သားပုံလေ.. "
" အေး...ချောတယ်ဟ.. မင်းမော်ကွန်းနဲ့တူလိုက်တာ.. "
" တူမှာပေါ့ဟ.. ငါအဲ့ဒီတုန်းက ရှေ့ တန်းထွက်နေရတယ်လေ.....ဇင်ဝိုင်း ကြားကားဝင်ဆွဲသွားတာနေမှာပေါ့ "
« Reply #721 on: March 09, 2012, 10:15:29 AM »
" ပျောက် တဲ့သူ ပျောက် သွား ပြီ "
ပါမောက္ခများပါဝင်သော ကော်မရှင် အဖွဲ့ သည် လေ့လာစစ်ရေးတာဝန်ဖြင့် စိတ်ကျန်းမာရေး
အထူးကု ဆေးရုံသို့ရောက်လာသည် ။ အခြေအနေ အဆိုးဆုံး လူနာကို ခေါ်လာသည် ။
" ခင်ဗျား နာမည် ဘယ်လိုခေါ်သလဲ "
လူနာက ဘာကိုမှ စိတ်ဝင်စားခြင်းမရှိသည့် နလပိန်းတုန်း ပုံစံမျိုးဖြင့် ပြန်ဖြေသည် ။
" မသိဘူး. "
" ခင်ဗျား အဖေရဲ့နာမည်ကိုရော သိသလား "
ပါမောက္ခ တစ်ယောက်က ၀င်ပြောသည် ။
" ဒီလူနာကို ကျနော် တာဝန်ယူတယ်ဗျာ.. "
တစ်နှစ်တိတိ ကြာသွားသည် ။ ထိုကော်မရှင်ပင် ထိုဆေးရုံသို့ရောက်လာသည် ။ မနှစ်ကလူနာ
ကိုပင် ပြန်မေးသည် ။
" အင်ဒရေ ပါ "
" ခင်ဗျား အဖေနာမည်ကရော.. "
" ကျနော့် အဖေနာမည်က ဦးအီဗန် ပါ..။ နိုင်ငံတော်လယ်ယာမှာ ထရက်တာ မောင်းပါတယ်.. "
ကော်မရှင် အဖွဲ့ ဝင်များ အရမ်းအံ့သြသွားကြသည် ။ သို့ နှင့် လူနာအား တာဝန်ယူ ကုသပေးသူ
ပါမောက္ခကို ၀ိုင်းမေးကြသည် ။
" ပရော်ဖက်ဆာ...ဒီလူ ဘယ်လိုလုပ်ပြီး ရောဂါပျောက်သွားတာလဲဗျ... "
ဘာကိုမှ စိတ်ဝင်စားခြင်း မရှိသည့် နလပိန်းတုန်း ပုံစံမျိုးဖြင့် ပါမောက္ခ ပြန်ဖြေသည် ..။
« Reply #722 on: March 10, 2012, 09:33:48 AM »
ပိုက် ဆံ လို ချင် တယ်
စိတ်ကျန်းမာရေး အထူးကု ဆေးရုံတွင်ဖြစ်သည် ။ ဆေးရုံအုပ်ကြီးသည် ပြတင်းပေါက်မှနေ၍ အောက်ကို ငုံ့ ကြည့်လိုက်သည် ။
လူနာများ လမ်းပေါ်မှာ တွားသွားနေသည်ကို မြင်ရသည် ။ သို့ နှင့် အလုပ်သင် ဆရာဝန်လေးကိုခေါ်ပြီး ဘာဖြစ်နေသလဲ ဆိုသည်ကို
သွားကြည့်ရန် ခိုင်းလိုက်သည် ။ နောက် နှစ်နာရီခွဲ အကြာတွင် ဆရာဝန်လေး ပြန်ရောက်လာသည် ။တကိုယ်လုံး ညစ်ပတ်ပေရေ နေသည် ။
ဆရာဝန်ကြီးက မေးသည် ။
“ အောက်မှာ ဘာဖြစ်နေတာလဲ “
“ လူနာတစ်ယောက်က ကတ္တရာလမ်းပေါ်မှာ မြေဖြူနဲ့မျဉ်းတား
လိုက်တယ်..။ အဲ့ဒီမျဉ်းကြောင်းအတိုင်း တွားသွားပြနိုင်တဲ့သူကို
ဒေါ်လာ တစ်ထောင်ပေးမယ်လို့သူပြောတယ်..။ အဲ့ဒါနဲ့ လူနာ
တွေ တစ်ယောက်ပြီး တစ်ယောက် ကြိုးစားနေကြတာပါ…. “
“ မောင်ရင်က ဘာဖြစ်လို့အခုမှ ပြန်ရောက်လာရတာလဲ “
“ ဆရာကြီးကလဲ..ဒေါ်လာတစ်ထောင်ဆိုတဲ့ပိုက်ဆံ နည်းတာ
မှတ်လို့“
« Reply #723 on: March 10, 2012, 10:20:29 AM »
" မ ဖြစ် နိုင် တာ မ ရှိ ပါ "
ဂျော်ဂျီယာပြည်နယ် ၊ ကျေးရွာာလေး တစ်ရွာမ အဘိုးကြီး ဂေါ်ဂီသည် မော်စကိုသို့သုံးရက်ကြာ ခရီးထွက်မည်ဖြစ်၍
ဘူတာရုံတွင်လိုက်ပို့ သူများနှင့် စည်ကားနေသည် ။ လိုက်ပို့ သူများထဲက တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
“ အဘိုး ဂေါ်ဂီ …၊ မော်စကို ရောက်ရင် ဘော်လ်ရွိုင်း ဇာတ်ရုံမှာ ဘဲလေး ကြည့်ဖြစ်
အောင် ကြည့်ခဲ့စမ်းပါ…။ နောက်တော့ ဒူဘလွန်ကာ ( သိုးသားရေနှင့် လုပ်သည့်
ဆောင်းဝတ်ရုံ ) တစ်ထည်ကို ဖြစ်တဲ့နည်းနဲ့ရအောင်ဝယ်ခဲ့ပါ..။ အဲ့…ပြီးရင်တော့
လီနင့် ဗိမာန်ကိုသွားပြီး. အလုပ်သမားလူတန်းစားရဲ့ခေါင်းဆောင်ကို ဂါရ၀ပြုခဲ့ပါ
ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ရုပ်ကလာပ်ကို ဆေးစီရင်ပြီး မှန်ပေါင်းချောင်မှာ ထည့်ထား
ထားတယ်ဆိုပဲ…အဲ့ဒီ သုံးခုကို လုပ်ခဲ့နိုင်မှ မော်စကိုကို သွားရကျိုး နပ်မှာနော် “
“ အဲ့ဒါဆိုလဲ မဖြစ်မနေ လုပ်ရတာပ ငါ့တူရယ်… “
အဘိုးကြီးဂေါ်ဂီ မော်စကိုသို့ ရောက်လာသည် ။ ပထမနေ့ တွင်ပင် ဘော်လ်ရွိုင်း ဇာတ်ရုံသို့သွားပြီး.လက်မှတ်အရောင်း
ဌာနတွင် ထိုင်နေသော အမျိုးသမီးငယ်ကို ပြောသည် ။
“ သမီးရယ်… ဒီနေ့ ည ကမဲ့ “ ငန်းတို့ ပျော်ရာ ရေကန်သာ “ ဘဲလေးအတွက် လက်
မှတ်တစ်စောင် ရောင်းပါကွယ်… “
အဘိုးကြီးကို “ ရူးနေသလား “ ဆိုသည့် အမူအရာဖြင့် အမျိုးသမီးက ကြည့်လိုက်ပြီး ပြောသည် ။
“ မဖြစ်နိုင်ဘူး အဘိုး…၊ ဘော်လ်ရွိုင်းက ဘဲလေးကို ကြည့်ချင်ရင် လွန်ခဲ့တဲ့ သုံးလ
လောက်ကတည်းက လက်မှတ်ကို ကြိုဝယ်ထားရတယ်ရှင့်၊ လက်မှတ် တစ်စောင်
မှ မကျန်တော့ဘူးရှင့် “
အိပ်ထဲမှ ငွေစက္ကူများကို အဘိုးကြီး ထုတ်လိုက်သည် ။ တစ်ရာတန် တစ်ရွက်ကို ကောင်မလေး၏ ရှေ့ ကို ထိုးပေးလိုက်သည် ။
“ ဒါ..သမီးကိုယ်တိုင် ကြည့်ဘို့ ..( နောက် တစ်ရာတန် တစ်ရွက်ကို ထပ်ထုတ်လိုက်
ပြီး ) ဒါကတော့ အဘိုး အတွက် “
အမျိုးသမီးက ပိုက်ဆံနှစ်ရွက်ကို ခပ်မြန်မြန်လေး ယူလိုက်ပြီး အဘိုးကြီးကို လက်မှတ်တစ်စောင် ထုတ်ပေးလိုက်သည် ။
ထိုနေ့ ည.. အဘိုးကြီး ဘဲလေး ကြည့်လိုက်ရသည် ။
ဒုတိယရက်… ။ ရင်ပြင်နီ ရှေ့ ရှိ “ ဂွမ်း “ စတိုးဆိုင်ကြီးသို့သွားသည် ။ အရောင်းစာရေးမလေးတစ်ယောက်အနားသို့ကပ်
သွားပြီး အဘိုး ဂေါ်ဂီ ပြောသည် ။
“ သမီးရယ်.. အဘိုးအတွက် ဒူဘလွန်ကာ တစ်ထည် ရောင်းပါကွယ်.. “
ပြူးကျယ်သော မျက်လုံးများဖြင့် အဘိုးကြီးကို ကြည့်ပြီး စာရေးမလေး ပြောသည် ။
“ ဒူဘလွန်ကာ ဆိုတာ အင်မတန် ရှားပါးတဲ့ ပစ္စည်းရှင့် ..ပြီးတော့ ဈေးကလည်း
အင်မတန် ကြီးတယ်..။ ကျမတို့ ဆိုင်မှာ မရှိပါဘူး… “
အဘိုးကြီး ငွေစက္ကူများကို အိတ်ထဲက ထုတ်သည် ။ ရူဘယ် ၁၅၀၀ ကို စာရေးမ၏လက်ထဲ ကမ်းပေးလိုက်သည် ။
“ အဲ့ဒါ သမီး ဒူဘလွန်ကာ ၀ယ်ဝတ်ဘို့ …( နောက်ထပ် ၁၅၀၀ ထုတ်ပြီး ) ဒါက
အဘိုး အတွက် “
ပိုက်ဆံတွေကို စာရေးမလေးက ဖြတ်လတ်စွာယူလိုက်သည် ။
“ ခဏနေဦး.အဘိုး… ကျမ ပြန်လာခဲ့မယ်.. “
ကောင်မလေး ဆိုင်နောက်သို့ထွက်သွားသည် ။ မကြာမီ ဒူဘလွန်ကာ တစ်ထည် ပိုက်ပြီး ပြန်ထွက်လာသည် ။ အဘိုး ဂေါ်ဂီ
ဒူဘလွန်ကာ တစ်ထည် ရလိုက်ပြီ….။ ကိစ္စ သုံးခုမှာ နှစ်ခု ပြီးသွားပြီ…။ ခေါင်းဆောင်ကြီးကို ဂါရ၀ ပြုဘို့ ပဲ ကျန်တော့သည် ။
ကနေ့အချိန်မရှိတော့ ..။ မနက်ဖြန် ညနေ ဘူတာမဆင်းခင် ပြီးအောင် လုပ်ရမည်…။ မနက်ကိုးနာရီတိတိ ဆိုင်ဖွင့်သည်နှင့် ကုန်စုံ
ဆိုင်ကြီးတွင် နာမည်ကြီး ကော့ညက်အရက်ဆယ်ပုလင်းကို အဘိုးကြီး ဂေါ်ဂီ ၀ယ်လိုက်သည် ။ ပုလင်းတွေကို လက်ဆွဲအိတ်ထဲ
ထည့်ပြီး ဗိမာန်ရှိရာ ရင်ပြင်နီဘက်သို့သွားသည် ။ ဂါရ၀ပြုရန် တန်းစီစောင့်နေကြသည့် လူတန်းကြီးသည် နှစ်မိုင်နီးပါးလောက်
ရှည်လျှားသည် ။ အဘိုး ဂေါ်ဂီ လူတန်းကြီးကို စွေကြည့်လိုက်ပြီး ဗိမာန်ရှေ့ တည့်တည့်ကို ချီတက်သွားသည် ။ ဗိမာန် အ၀င်ပေါက်တွင်
သတိအနေအထားဖြင့် ရပ်ပြီး စောင့်ကြပ်နေကြသည့် စစ်သားနှစ်ယောက်အနက် တစ်ယောက်၏ ဘေးနားတွင် အရက်ပုလင်းအိတ်ကို
ချထားလိုက်သည် ။ အိတ်ကို အလုံပိတ်ထားခြင်း မဟုတ်သည့်အတွက် အစောင့်စစ်သားက လှမ်းကြည့်သောအခါ ပုလင်းတွေက်ို အထင်း
သား မြင်နေရသည် ။ အဘိုး ဂေါ်ဂီက စစ်သားလေး ကြားရုံ ပြောသည် ။
“ သားရယ်…အဘိုးက နယ်က လာရတာ….ဒီနေ့ ညနေပဲ ပြန်ရမှာပါ…။ မပြန်ခင်
ခေါင်းဆောင်ကြီးကို ဂါရ၀ ပြုချင်လိုက်တာကွယ်…။ စောင့်နေတဲ့ လူတန်းကလဲ
ရှည်လွန်းလှတယ်…။ အဘိုးကို ကူညီပါလားကွယ်…။ ဂါရ၀မှ မပြုရရင်တော့ အ
ဘိုး.. အပြန် ဖြောင့်မှာ မဟုတ်တော့ဘူး… “
အရက်အိတ်ကို အစောင့်စစ်သား မသိမသာ ထပ်ကြည့်သည် ။ထို့ နောက် အဘိုးအိုကြားရုံ ပြန်ပြောသည် .။
“ အဘိုး ကိုယ်တိုင် ၀င်ကြည့်မှာလား…ဒါမှ မဟုတ်..ကျနော်တို့ထုတ်ယူလာရမလား.. “
« Reply #724 on: March 13, 2012, 09:12:46 AM »
" သူ လည်း စား သ ကိုး "
မွေးမြူရေးသမားတစ်ယောက်သည် အသိဖြစ်သူ ကုန်သည်ကြီးထံ ရောက်လာပြီး မိမိ မွေးထားသော နွားမများ
အတွက် နွားထီးတစ်ကောင် ၀ယ်လိုသဖြင့် ပိုက်ဆံချေးပါရန်မေတ္တာရပ်ခံသည် ။ ကုန်သည်ကြီးက တောင်းသော ပိုက်
ဆံကို ပေးလိုက်သည် ။ ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၄င်းတို့ နှစ်ဦး ပြန်ဆုံကြသောအခါ ကုန်သည်ကြီးက မေးသည် ။
“ ဘယ့်နှယ့်လဲ….နွားထီး ၀ယ်ပြီးပြီလား “
“ ၀ယ်ပြီးပါပြီ…ဒါပေမဲ့ ဘာမှ မထူးဘူး..နွားမတွေကို ဒီကောင် လုံးဝ ဂရုမစိုက်ဘူး.. “
“ အဲ့ဒါဆို တရိစ္ဆာန် ဆရာဝန်ဆီ သွားပြလေ. “
ရက်အနည်းငယ်အကြာတွင် ၄င်းတို့ နှစ်ဦး ဆုံမိကြပြန်သည် ။ ကုန်သည်ကြီးက မေးသည် ။
“ ဆရာဝန်ဆီ သွားပြဖြစ်သေးလား “
“ ပြပြီးပြီ… အခုမှပဲ ဟန်ကျတော့တယ် “
“ ဟုတ်လား…ဆရာဝန်က ဘာဆေး ပေးလိုက်လို့ လဲ “
“ ဆေးပြားတွေပဲဗျ.. “
“ ဆေးနာမည်က ဘာတဲ့လဲဗျ. “
“ ဆေးနာမည်တော့ မသိဘူးဗျ.. စားလိုက်ရင် ရှိန်းတိန်းတိန်းနဲ့“
« Reply #725 on: March 14, 2012, 09:23:34 AM »
ကြိုက် တာ ရွေး
ဘုရားရှိခိုးကျောင်းသို့ပထမဦးဆုံးအကြိမ် ရောက်လာဟန်ရှိသည့် လူငယ်ကို ဘုန်းကြီးက မေးသည် ။
“ နိဗ္ဗာန် နဲ့ငရဲ ဘယ်ကို ရောက်ချင်သလဲ င့ါသား “
“ တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဘယ်လို ကွာခြားပါသလဲ ဖာသာ “
“ နိဗ္ဗာန်မှာ ရာသီဥတု ကောင်းတယ်….အဲ…ငရဲမှာတော့ အပေါင်းအသင်း တောင့်တယ်. “
အ သား အ ရောင် ခွဲ ခြား မှု
အမေရိကန် သန်းကြွယ်သူဌေးကြီး မောင်းလာသည့် ကာဒိလက်ကားကြီးသည် တစ်နေရာတွင် နီဂရိုး
ယောက်ကို အရှိန်နှင့် တိုက်မိသည် ။ နီဂရိုးမှာ နေရာတွင်ပင် ပွဲချင်းပြီး သေဆုံးသွားလေသည် ။ ရဲစခန်း
တွင် ရဲမှူးက သူဌေးကြီးကို မေးသည် ။
“ လူကြီးမင်းရဲ့ကားနဲ့ တိုက်မိတုန်းက သေဆုံးသူဟာ တစ်နာရီ ဘယ်နှစ်မိုင်နှုန်းနဲ့ 
« Reply #726 on: March 17, 2012, 09:17:20 AM »
" ထိုက် တန် သူ "
ကိုဘမောင် ချောကလက်ဘူးကိုကိုင်ပြီး အိမ်သို့ ပြန်လာသည် ။ သားသမီးလေးယောက်က ၀မ်းသာအားရ အဖေ့ကို
ကြိုဆိုကြသည် ။ ကိုဘမောင် ပြောသည် ။
" ကိုင်း...သားတို့သမီးတို့ ရေ....အမေ့စကားကို အမြဲတမ်းနားထောင်တဲ့သူ ..မေမေ့ကို ဘယ်တော့မှ ပြန်မပြောတဲ့သူ
မေမေ လုပ်ခိုင်းတာ မှန်သမျှကို မငြီးမငြူ လုပ်ပေးတဲ့သူ ဒီချောကလက်ကို ရမယ်ဟေ့..ဘယ်သူရမယ် ထင်သလဲကွယ် "
ကလေး လေးယောက်စလုံး ပြိုင်တူ ဖြေလိုက်ကြသည် ။
" ဖေဖေ "
« Reply #727 on: March 27, 2012, 01:43:53 PM »
ပယ်ရီစထရွိုင်ကာခေတ်...၊ ပေါ်လစ်ဗျူရိုအဖွဲ့ အစည်းအဝေးတွင် အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး ဂေါ်ဘာချော့က မေးသည် ။
" အရက်သေစာ သောက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေးလုပ်ငန်းရဲ့အခြေအနေ ဘယ်လို ရှိသလဲ "
" ပထမအဆင့်ကို အောင်မြင်စွာ ဖြတ်ကျော်လိုက်ပြီ ခင်ဗျ... အမြည်း စားစရာ မရှိတော့ဘူး.. "
" ကျ နော် တို့လူ "
ဆိုဗီယက်ကွန်မြူနစ်ပါတီ..၂၇ ကြိမ်မြောက် ညီလာခံ ကျင်းပနေသည် ။ ဂေါ်ဘာချော့ မိန့် ခွန်း ပြောသည် ။
" ရဲဘော်တို့ ..ပယ်ရီစထရွိုင်ကာခေတ်မှာ ကျနော်တို့အရင်ကထက် ပိုပြီး ကောင်းကောင်းမွန်မွန် နေကြရပါလိမ့်မယ် "
" ကျနော်တို့ဆိုတာ ဘယ်သူ့ ကို ပြောတာလဲ " ခန်းမထဲက အသံ တစ်သံ ဖြစ်သည် ။
" ကျနော့် နာမည် ယဲလ်စင်...ဗဟိုကော်မတီဝင်ပါ "
" အဲ့ဒါဆို....ကျနော်တို့အထဲမှာ ခင်ဗျားလည်း ပါတယ်....စိတ်ချ.. “
« Last Edit: March 27, 2012, 01:45:41 PM by tunaye2011 »
« Reply #728 on: March 27, 2012, 02:22:02 PM »
" ဘယ် လို မှ မ လွတ် ပါ လား "
ဆိုဗီယက် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၏ အလှည့်ကျ အထွေထွေ ညီလာခံကို ကရင်မလင် နန်းတော်ဝင်းအတွင်းရှိ ကွန်ဂရက် ခန်းမတွင်
ကျင်းပနေသည် ။ ပါတီကိုယ်စားလှယ် ငါးထောင် တက်ရောက်ကြသည် ။ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး ဘရက်ဇညက် က နိုင်ငံရေးအ
စီရင်ခံစာကို တင်သွင်း ဖတ်ကြားသည် ။
တစ်နာရီကြာသွားသည် ။ ကိုယ်စားလှယ် ထက်ဝက်နီးပါး အိပ်ပျော်သွားကြသည် ။
နှစ်နာရီ ကြာသွားသည် ။ မိန့် ခွန်းမပြီးသေး...။ ကိုယ်စားလှယ် သုံးပုံ နှစ်ပုံ အိပ်မောကျကုန် ကြသည် ။
သုံးနာရီ ကြာသွားသည် ။ ဘရက်ဇညက် မိန့် ခွန်းပြောဆဲ...ကိုယ်စားလှယ်ငါးယောက်သာ မိန့် ခွန်းကို ဆက်နားထောင်နေကြသည် ။
ကျန်သူများ၏ ဟောက်သံကြောင့် မိန့် ခွန်းကို ကောင်းကောင်းပင် မကြားရတော့ ။
လေးနာရီ ကြာသွားသည် ။ ခေါင်းဆောင်ကြီး အစီရင်ခံစာ တင်သွင်းနေသည်ကို ကိုယ်စားလှယ်တော် တစ်ယောက်သာ ဂရုတစိုက်
နားထောင်နေသည် ။ ကျန်သူတွေအားလုံး အိပ်မောကျနေကြပြီ...။ ဂရုတစိုက် နားထောင်နေသူ ကိုယ်စားလှယ်တော်၏ ဘေးတစ်ဖက်တစ်
ချက်တွင်အရပ်ဝတ်နှင့် ကေ ဂျီ ဘီ အရာရှိ နှစ်ယောက် လာရပ်လိုက်ကြသည် ။ တစ်ယောက်က ပြောသည် ။
“ ခင်ဗျားကို ကျနော်တို့ ဖမ်းရပါမယ်... “
ကိုယ်စားလှယ်တော်က ပြူးတူးပြဲတဲနှင့် ပြန်ပြောသည် ။
“ ဘာဖြစ်လို့ လဲ....ကျနော် ဘာလုပ်လို့ လဲ...ခေါင်းဆောင်ကြီးရဲ့ မိန့် ခွန်းကို ကျနော် ကောင်းကောင်း နားထောင်နေတာပဲ “
“ The Enemy Never Sleeps ရန်သူဆိုတာ ဘယ်တော့မှ မအိပ်ဘူး ဆိုတဲ့ စကား ကြားဖူးတယ် မဟုတ်လား..
« Reply #729 on: March 27, 2012, 02:28:04 PM »
" ဆို လို တဲ့အ ဓိ ပ္ပါယ် "
ဆိုဗီယက် ပြည်သူလွှတ်တော် အစည်းအဝေး ကျင်းပနေသည် ။ ဂေါ်ဘာချော့ မိန့် ခွန်း ပြောသည် ။ လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်
တစ်ဦးသည် ဂေါ်ဘာချော့ကို တစ်ချိန်လုံး လက်သီးဆုပ်ပြသည် ။ ဂေါ်ဘာချော့က တုန့် ပြန်သောအားဖြင့် လက်ချောင်းဖြင့် နားထင်ကို
ထောက်ကာ ၀ိုက်ပြသည် ။ ခဏကြာသော်အခါ အရပ်ဝတ်နှင့် လုံခြုံရေး အရာရှိနှစ်ဦး ကိုယ်စားလှယ်တော်အနား ရောက်လာပြီးမေးသည်။
" မီခေးလ်ဆာဂေး ယေဗစ်ခ်ျ ( ဂေါ်ဘာချော့ ) ကို ခင်ဗျား တစ်ချိန်လုံး ဘာဖြစ်လို့လက်သီး ဆုပ်ပြနေရတာလဲ "
" သြော်....ဒါလား....ကျနော်က တိုင်းပြည်ကို ပြတ်ပြတ်သားသား နဲ့ ခပ်ကြမ်းကြမ်း ကိုင်ပါဆိုပြီး လက်သီးဆုပ်ပြတာပါ...
အဲ့ဒါ..သူက သူ့ ဦးနှောက် ဒီလောက်မကောင်းဘူးဆိုတာကိုပဲ ပြန်ပြောနေတယ်.... ဒုက္ခပါပဲ... "